LED အီလက်ထရောနစ်ဗွီဒီယိုနံရံမျက်နှာပြင်စက်မှုလုပ်ငန်းပြproblemsနာများကိုသုံးသပ်ခြင်း - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင် panel ကိုဆယ်စုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတဆင့်, ရိုးရာ ဦး ဆောင်သောကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ကိုအစားထိုးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာများဖြစ်သည်. တကယ်တော့, ပြည်တွင်း ဦး ဆောင်သူများရှေ့တွင်ဖြေရှင်းရမည့်နည်းပညာဆိုင်ရာပြproblemsနာများစွာရှိနေသေးသည်. ကျွမ်းကျင်သူများကဤပြproblemsနာများကိုစာရင်းပြုစုခြင်းနှင့်လူတိုင်း၏အာရုံကိုနှိုးဆွဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပါလိမ့်မယ်.
LED chip ကိုကျွမ်းကျင်မှု, ဒါက, ဒီပေါင်းစပ် semiconductor သတင်းအချက်အလက်, LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၏အရှိဆုံးအထက်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆုံးဖြတ်သည်, နှင့်လည်း LED ၏အဓိကကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်. ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာနိုင်ငံအနည်းငယ်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်, ထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်နှင့်ဂျပန်အဖြစ်, နှင့်မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်. လူတွေအားလုံးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်ထဲမှာအဓိကကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုနားလည်အောင်အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်.
ကျွမ်းကျင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, manufacturability ဒီဇိုင်းကိုလျှော့တွက်ထားသည်, နှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်လ်တာ၏ကိုက်ညီ application ကိုမှအရေးပါမှုပူးတွဲမဟုတ်ပါဘူး. ထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်ခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ထုတ်ကုန်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်, နှင့်ကုန်စည်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတွင်အသုံးပြုပါ, အထွေထွေကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များအားလုံးကိုအတူတကွပေါင်းစပ်။ ပိုမိုစံနှုန်းကိုက်စေရန်, ဒါက, ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစံနှင့်ရိုးရှင်းစေရန်, ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်, ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကိုတိုစေပြီးကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပါ. ယခု၏ဘုံဖြစ်ရပ်ဆန်း LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ကုမ္ပဏီများသည် အများအပြားထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးအဘယ်သူမျှမကရိယာရှိသေး၏, ဒါကနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ. ထောက်ပံ့သောကရိယာများအသုံးပြုခြင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပျက်ကွက်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်. ဒါဟာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လျစ်လျူရှုမရနိုငျသောပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်.
အပေါ်မှအောက်သို့စွမ်းရည်နည်းပါးခြင်း, ထိပ်ဆုံးမှအောက်သို့ရည်မှန်းချက်စိစစ်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မရှိခြင်း. ကျနော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များခွဲခြားရန်လိုအပ်သည်, လျှပ်စစ်ပစ်မှတ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရည်ရွယ်ချက်များ, အသေးစိတ်မှစတင်ပါ, ယုံကြည်စိတ်ချရရည်ရွယ်ချက်များ၏အတည်ပြုနည်းလမ်းနှင့်အတူကူညီ, နှင့် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏မွေးရာပါယုံကြည်စိတ်ချရပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်ကိုရောက်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်သက်ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနည်းလမ်းများနှင့်စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်များရေးဆွဲ.
များစွာသောရှိပြီးသားအီလက်ထရောနစ်ထုတ်လုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများအဘို့အ, ငါတို့သည်သူတို့ကိုလျစ်လျူရှု, ပင်အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဘယ်သူမျှမစံချိန်စံညွှန်းများရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်. အမှန်တကယ်, “LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်များအတွက်ယေဘုယျသတ်မှတ်ချက်”, “LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်များအတွက်စမ်းသပ်နည်းလမ်း” နှင့်အခြားဒေသခံစံချိန်စံညွှန်းများအမြဲတည်ရှိပါပြီ. တစ်ခုချင်းစီကို LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ကုမ္ပဏီကအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်, ထုတ်လုပ်မှုစံအတိုင်းထုတ်လုပ်ရန်နှင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းစစ်ဆေးပါ, စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံး၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်.
ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်သာအာရုံစိုက်ပါ, မသက်ဆိုင်ကုန်စည်ဘဝသံသရာ၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏. အောင်မြင်မှုတိုးချဲ့မှု၏အမြန်သည်အဖွဲ့၏တိုးတက်မှုစွမ်းရည်နှင့်မကိုက်ညီပါ, အလွန်အကျွံကတိကဝတ်, နှင့်မလုံလောက်ပေးပို့. သို့သော်, LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်သက်တမ်း၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်သည်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ထက်များစွာပိုမိုမြင့်မားသည်. မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, ဒီရေပိတ်ပစ်မှုသည်စျေးကွက်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အချို့သောကုမ္ပဏီများအားမျက်စိကျလာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်, အောင်မြင်မှုအသင်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုးတက်မှု၏ပျက်ကွက်မှုအတွက်ရလဒ်, အရင်းအနှီးကွင်းဆက်ပြိုကွဲခြင်းနှင့်လူကြီးများစွာပြေးခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာမြေသို့ဆင်းသက်ရမည်, တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်, LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ကုမ္ပဏီနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးပင်လျှင်ကျန်းမာ။ တည်ငြိမ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်.
အထက်ပါပြproblemsနာများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း, ကျနော်တို့သူတို့နှင့်တ ဦး တည်းအားဖြင့်သူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်. ဒီလိုမျိုး, တရုတ်နိုင်ငံ၏ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်စက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့ဆက်ပါလိမ့်မယ်, မှပြောင်းလဲ “တရုတ်ပြည်တွင်ပြုလုပ်သည်” ရန် “တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖန်တီးခဲ့သည်”, LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးတိုးတက်, စျေးနှုန်းနိမ့်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးနိမ့်ခြင်း၏ဆိုးရွားသည့်ပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်, နှင့် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏အဓိကနည်းပညာကျွမ်းကျင်ကြီးမားတဲ့ပို့ကုန်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသည်.
ရိုးရာအလင်းရင်းမြစ်ကျော် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏အားသာချက်များဘာတွေလဲ
LED ကြော်ငြာငှားရမ်းခြင်းအဆင့် P3.91 နံရံ၏အသိဉာဏ်လမ်းကြောင်းသစ်
LED မျက်နှာပြင်ကြော်ငြာကြော်ငြာနံရံ၏ဌာနခွဲနှင့်ခွဲခြား မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် LED မျက်နှာပြင်ကြော်ငြာကြော်ငြာနံရံ၏ဌာနခွဲနှင့်ခွဲခြား
LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်ပုံသေသို့မဟုတ်အငှားနံရံကိုအသုံးများသောတပ်ဆင်နည်း မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်ပုံသေသို့မဟုတ်အငှားနံရံကိုအသုံးများသောတပ်ဆင်နည်း
LED မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်၏အသုံးပြုမှုနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် LED မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်၏အသုံးပြုမှုနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ